VOASAMBOTRY NY POLISY : Noampangain’ny sary naparitany tamin’ny finday nangalariny izy efa-dahy
Tovolahy miisa 4 indray no voasambotry ny polisin’ny boriboritany fahafito, ny zoma 15 marsa 2019 lasa teo, tokony ho tamin’ny 7ora sy sasany maraina. 17 mars 2019
Noho ny halatra finday tao anaty taksibe izay nalaza be tamin’ny gazety sy ny tambajotra serasera « facebook ». Raha tsiahivina kely ny zava-nisy dia nampiasain’ireo olon-dratsy sy namoahany ny sarin’izy ireo ny kaonty “facebook-ny tompon’ny finday very. Betsaka ny talanjona tamin’izany ary nazava tamin’ny rehetra nahita maso fa ireo mpangalatra no nampiasa ny finday.
Rehefa nahita ny vaovao niparitaka tamin’ny tambajotra sy ny gazety mahakasika ireo tovolahy nangalatra finday teny amin’ny 67ha ny Polisy dia nandray ny andraikiny avy hatrany. Fantatra nandritra ny fanadihadiana natao fa eny Ankasina no fonenan’ireo olon-dratsy ireo ka tonga dia nidina ifotony teny an-toerana ny polisy avy ao amin’ny boriboritany fahafito. Tratra tao an-tranony tokoa izy efa-dahy ary mbola tratra tao an-tranony ilay finday izay nangalarin’izy ireo. Nosamborina avy hatrany izy efatra mirahalahy hita tao anatin’ ny tambajotra serasera ireo.
Avy hatrany dia noentina tany amin’ny kaomisarian’ ny polisy boriboritany fahafito ireo jiolahy ary samy niaiky ny heloka vitany. Manara-maso ny trangana fanendahana, vaky trano sy ny asan-jiolahy mahery vaika miseho eto an-drenivohitra hatrany moa ny eo anivon’ny Polisy ho fiarovana ny vahoaka sy ny fananany.